Kindle mafomati, ndeapi mafomati ayo Kindle anoverenga? Tsvaga! | MaReaders ese
Kindle mafomati, ndeapi eBooks aunogona kuvhura muAmazon muverengi?
Joaquin Garcia | | Amazon Kindle, eBooks, vaverengi
E-bhuku idhijitari faira rine bhuku kana chinyorwa chekutsikisa. Inowanzodaidzwa kuti ebook, zita rinobva kuChirungu izwi rekuti bhuku remagetsi. Pakutanga, zvishandiso zvinokwanisa kuverenga mabhuku emagetsi zvakavhiringidzwa nezwi rekuti ebook uye kana tikawedzera kune izvi mhango yemazwi anokomberedza mafomati ebook, kunyongana kuri pachena. Parizvino, vashoma vanhu vanoziva chaizvo kuti seiayo ari mafomati anoenderana ne Kindle, e-bhuku rekuverenga iro rinoonekwa nevakawanda kuve iro yakanakisisa eReader.
Havasi vese e-book vaverengi vanogona kuverenga zvakafanana mafomatiKazhinji, mugadziri wega wega anowanzo sanganisira imwe kana maviri emafomati avo pamwe neakawanda mafomati asina kusununguka. Mukati meiyi yechipiri kirasi yemafomati, Epub inomira pachena, inova yemahara ebook fomati, iyo txt, iyo pdf kana iro gwaro redhodhi. Nezve rudzi rwekutanga mafomati, mafomati epamhepo anowanikwa nevakagadziri vakuru, zvinowanzoenderana nekambani, asi zvese zvinobva mufomati yeEpub yavanoshandura. Chinokanganisa zvese izvi ndechekuti kana tikatenga ebook muchitoro chemabhuku, kunze kwekunge tiine fomati yemahara, hatizokwanise kuiverenga muverengi weimwe chitoro chemabhuku.
Izvi zvinokanganisa zvinowanzo kuve pachena mune iyo Amazon, ine vaverengi, Kindle, ivo vakangoverenga imwe nhamba yemabhuku, ayo, mafomati mana ndeeAmazon. Aya mafomati ari iyo Kindle Fomati 7, iyo Kindle Fomati 8, iyo mobi fomati uye iyo prc fomati. Aya mafomati anogona kunge akagadziridzwa akadai semobi kana Kindle Fomati 7 kana ivo vanotora yakajairwa, iyo Epub fomati sehwaro hwekugadzira mafomati aya. Muenzaniso wakanaka wekupedzisira ungave iwo Mhando Yemhando 8. Asi ngatitarisei zvakanyanya mafomati aya.
1 Iyo Kindle Fomati 7 kana inozivikanwawo seAZW
2 Iyo Kindle Fomati 8 kana AZW3
3 Kindle Mobi fomati
5 Iyo ebook fomati iyo Kindle Moto inogona kuverenga
Iyo Kindle Fomati 7 kana inozivikanwawo seAZW
Iyi fomati yeMhando ndeye yakagadziridzwa vhezheni yemobi fomati. Muna 2008 Amazon yakatenga kambani yeMobipocket uye iine zvibvumirano zvese zvekambani uye zvigadzirwa. Izvi zvaive zvisina kuwanda asi vaive nezvakakosheswa zvakanyanya neAmazon, patent yemafomati ebook, kunyanya mobi fomati. Iyo fomati fomati inoedza kutevedzera iyo OpenBook mitemo, fomati iyo yakavakirwa pane xml yewebhu standard. Mushure mekutenga, Amazon yakatora fomati, ichiremekedza mirau yese uye mashandiro ayo, ndokuunza yayo DRM, software inorambidza kushandiswa kwe ebook kune imwe account kana chishandiso, kushambadzira kwe ebook, ndoizvi Rudzi rwemhando rwakazvarwa 7 kana AZW.
Nekufamba kwenguva, maAmazon eReaders akashanduka uye vaine iwo software uye mafomati avanogona kutamba, aya ndiwo maitiro ataigona kuona iyo Kindle Fomati 8.
Iyo Kindle Fomati 8 kana AZW3
Yakanga iri shanduko yeiyo Kindle Fomati 7, yainge isisina iyo mobi fomati pamwe neyakaganhurirwa ne drm asi chaive chimwe chinhu. Iyo Kindle Fomati 8 kana AZW3 ibhuku rinotevera chiyero che EPUB3, iyo yavanosanganisira iyo drm uye zvakare yakasungirirwa kune iyo faira muAZW kana Kindle Fomati fomati 7 kuitira kuti iwirirane nemidziyo inoverenga iyo yekare fomati. Pakasikwa mobi fomati uye iyo Kindle Fomati 7, iyo standardization yeiyo epub fomati yakanga ichiri inokwanisika uye zvichinyonganisa, saka Amazon haina kuzotya neiyi fomati kudzamara kusvika kweAZW3. AZW3 haishandisi simba reHTML5 kusvika pauzere hwayo sezvo mamwe ma tag matsva asingavatsigire uye mamwe apera kushandisa kuishandisa. Uye zvakare, iyo CSS3 standard haina kuteedzerwa zvizere, zvimwe zvinhu zvakaita seyakagadziriswa kumashure dhizaini hazvienderane neCSS3.
Kindle Mobi fomati
Pamwe pamwe nemhando idzi dzeMhando, maReader emhando inotsigirawo mobi fomati, kunyangwe ichimiririra chikamu chekare cheAmazon, iyi fomati inoramba iripo uye Amazon inoramba ichitsigira mumaReaders ayo. Ehezve, chete fomati iyo isina DRM-sekutsanangurwa neAmazon. Zvichakadaro DRM-isina Mobi ine akati wandei marongero ekudzivirira kubvira pakagadzirwa nekambani Mobipocket inomiririra yechipiri ebook fomati yavakagadzira.
Iwe unoda kuziva kuti zvinotora nguva yakareba sei kuverenga bhuku? Iyi webhusaiti inokuudza
Yekutanga yeaya mafomati anowanikwa neAmazon nekutenga kwekambani uye iyo yaakatumira kune vaverengi vayo ndiyo prc fomati. Iyo prc iri yakapusa fomati yakafanana chaizvo neye mobi fomati asi isina zvidimbu zvekudzivirira, zvekuti parizvino vese vaverengi vanoverenga mobi fomati vanogona kuverenga iyo prc fomati. Izvo zvisingawanzo kuona ma ebook mune ino fomati, zvirinani izvo zvazvino, asi sezvo pasina shanduko inoshanduka yeiyo Kindle katalog, zvinodikanwa kuti uchengete iyi fomati yekare muvaverengi, zvirinani pakuverenga ebooks ekare.
Pamusoro pemafomati ayo, Kindle zvakare inotsigira mamwe mafomati ane avo vasiri maAmazon kana kupihwa marezenisi pasi peGPL. Pakati pemafomati aya, PDF inomira pachena, fomati fomati isiri iyo yega ebook fomati, asi irwo rudzi rwefaira runoshanda kwazvo pakuverenga. Iyo Pdf ndeyaAdobe uye zita rayo, Portable Gwaro Fomati, inoreva kune yayo yepamusoro ficha, kutakurika. Kunyangwe Adobe ari iye mushambadzi mukuru weiyi fomati, muna 2008 yakaisunungura uye ikava chikamu cheInternational Organisation for Standardization neiyo yakave yakavhurika fomati. Izvi zvakaita kuti pdf fomati uye kutakurika kwayo zvishande zvakanaka paAmazon eReaders, zvisinei saizi yescreen, parizvino iri pasi pe9,7 ", inoita kuti kuverenga kuomere vamwe vanhu. Pakutanga izvi zvakaedzwa kugadzirisa pamwe nekugadzirwa kweMhando hombe, inozivikanwa Kindle DX, asi iyi eReader yakakurumidza kusiiwa ichitsvaga dzimwe nzira dzakadai sekushandura pdf gwaro kuita Epub fomati kana kungo nyaradza iyo pdf kune saizi yeiyo chidzitiro.
Mhando zvakare inokwanisa kutsigira mafomati ekare, senge txt kana Html. Yekutanga yavo, iyo txt ndiyo yakapusa fomati irimo mukomputa yenyika. Vazhinji vedu takashanda nemhando iyi, ndiwo manyorerwo anogadzirwa neWindows Notepad, asi parizvino kuverenga gwaro sebhuku mune iyi fomati ibasa rakaoma sezvo fomati iyi isingazive sarudzo dzekutanga kana marongero ezvinyorwa.
Vaverengi vechizvino zvemhando vakapinza kuverenga kweiyo doc uye mafomati eHTMLAya mafomati anogadzirwa neMicrosoft Word uye ndeimwe nzira chaiyo yemabhuku akagadzirwa mu txt. Kusiyana netxt, doc uye docx zvinyorwa zvinotibvumidza isu kuve rakagadziriswa uye rakafanogadzirirwa bhuku rekuverenga. Asi aya mafomati maviri haana kuitirwa kuti ave ebook futi, saka kushandiswa kwavo kune zvakati wandei zvinokanganisa mune chero muverengi. Imwe yeaya matambudziko mune saizi faira. Kana tikatarisa saizi yemabooks neAZW uye AZW3 mafomati, ichi hachina kunyanya kukura, kazhinji hachipfuuri ma megabyte maviri, zvisinei, ebook iri muHTML kana fomati yedhodhi inogona kutora kusvika katatu zvakapetwa, zvichinyanya kuoma gadzirisa uye shandisa neMhando.
Iwo emagetsi inki maReaders, ndokuti, iwo Mhando, anokwanisa zvakare kuburitsa mifananidzo, kunyangwe iwo asiri muvara, kana iwe uchigona kukoshesa misiyano uye shanduko mukuwanda. Izvi zviri mune yazvino Kindle, iyo ine ichangoburwa yemagetsi inki tekinoroji tekinoroji uye zvakare yakakwirira resolution, inonyatso kuongwa. Kana izvo zvatinoda kuona zviri mifananidzo paMoto Wemoto, pamusoro pezviri pamusoro tine mukana wekuona mifananidzo iri muvara. Zvimiro zvemifananidzo zvakawanda uye zvakasiyana, asi hapana Mhando inogona kuverenga mafomati ese. Chinhu chakanaka pamusoro peichi ndechekuti Amazon yatora hanya kuitira kuti vaverengi vayo vagone kuverenga mafomati akakurumbira emifananidzo. Nekudaro, iwo mafomati emifananidzo ayo yaachatsigira i jpg, png, bmp, gif.
Iyo ebook fomati iyo Kindle Moto inogona kuverenga
ari Kindle Fire inogona kutariswa se Kirasi yechipiri yevaverengi veMhando kunyange pasina munhu anovadaidza vakadaro. Hunhu hwemidziyo yemhuri yeMhando yeMoto ndeyeye piritsi, kunyange software yayo iri chaizvo, yakanangana nenyika yekuverenga, zvekuti kunyangwe saizi yemasikirini emidziyo iriko, yakasarudzwa kupa muverengi anonyaradza zvakanyanya kana achiverenga.
Iyo Kindle Moto inotakura pamoyo wayo vhezheni yeApple yakagadzirirwa neAmazon pachayo, yakadaro sisitimu yekushandisa inonzi FireOS. Kazhinji, zvinogona kunzi kuve piritsi uye kuva neApple, iyo Kindle Moto inogona kutsigira chero fomati, zvisinei Amazon kubva kune yekutanga modhi yakwanisa kuisa chero chirongwa kubva kuGoogle Store, saka tinogona kungoverenga mafomati anotaurira. isu maAmazon kunze kwekunge tashandura Amazon software.
Pakutanga, patinenge tichitenga yedu Kindle Moto uye kuibatidza, tinogona kuverenga chero ebook mafomati atataura pamusoro, asi tinokwanisa zvakare kuverenga mamwe mafomati eemultimedia ayo kunyangwe asiri iwo ane hukama ne ebook, rubatsiro rukuru kuziva kana uchishandisa ma ebook anoshanda.
Mumwedzi yapfuura, Amazon yakawedzera iyo Inonzwika sevhisi kune yayo ecosystem. Izvi zvagadzira michina ine isina-yemagetsi inki skrini inokwanisa kutamba mafomati edhiyo, kunyanya mafomati eanonzwika app, inova aax.
Iyo inonzwika fomati ndeimwe yemafomati matsva akaunzwa neAmazon kune ako zvishandiso ane lcd skrini kana Ruvara skrini. Aya madhivha ane simba kudarika maReaders, zvinoreva kuti anokwanisa kutsigira huwandu hukuru hwemafomati, kwete iwo chete anozivikanwa ebook asi mamwe mafomati anotipa mukana wekuona vhidhiyo, odhiyo uye nekuwedzera kubhurawuza kwewebhu.
Pakati pemavhidhiyo mafomati, mkv uye mp4 anomira kunze, kunyangwe ivo vachiverengawo 3gp uye vp8 (webm). Mukati memafomati edhiyo, kuwedzera kune iyo fomati yeax, ivo vanokwanisawo kutamba iyo mp3 faira, iyo OGG faira, yemahara odhiyo fomati iyo inogona kunge yakaenzana ne mp3 uye echinyakare mafaera ane WAV yekuwedzera.
Sezvatakambotaura, tinogona kushandura iyo software yeMhando yeMoto, kungave nekuwedzera maapplication ane apk kana nekubiridzira piritsi. Muchiitiko chechipiri, Amazon haina mutoro wechivimbiso, saka hazvikurudzirwe kuti uzviite kuti ebook iverengwe muepub fomati, asi mune yekutanga kesi, inogona kuitwa uye ichatitendera kuti tiwedzere mafomati matsva ebook senge fomati Epub. Izvi zvinozozivikanwa neMhando yedu yeMoto kana isu tikamisa mapurogiramu akaita saAldiko kana FbReader. Aya maapplication anogona kuwanikwa muchitoro cheGoogle, muchitoro cheAmazon uye kunyangwe pawebhusaiti yayo, saka kuzviwana kuri nyore uye kumisikidza kuri nyore kuita. Kana iyo purogiramu yawanikwa, tinoichengeta pahwendefa uye tinotara sarudzo ye "kuisa kubva kune zvisingazivikanwe masosi" izvo zvinotibvumidza isu kuti tiise chero app yatiri kuda.
Aya angangoita ari Kindle mafomati iyo Amazon eReaders inotsigira uye ini ndinotaura nehasha nekuti hatina kuenda mune chaiwo hunyanzvi ruzivo rwunogona kuvhiringidza muvhareji muverengi uyo anongotsvaga kuziva kuti kana kwete ma ebook aanotova nawo paMhando anogona kuverengwa kana kwete.
Isu tinovimba kuti neruzivo urwu rwese, watove kujekesa ndeapi mafomu Kindle anoverenga kunyangwe kana iwe uine mibvunzo, tisiye isu mhinduro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: MaReaders ese » makambani » Amazon Kindle » Kindle mafomati, ndeapi eBooks aunogona kuvhura muAmazon muverengi?
Kwete ePub ??
Pindura kuna l0ck0
Nacho Morato akadaro
hahaha, muchidimbu zvinyorwa hauna muvengi
Pindura Nacho Morató
Ndine moto unobvira uye kwete. Kuti ndiverenge handina kugutsikana. Kunyanya, irwo rudzi rwekusanzwisisika. Ini ndinogona kupedza maawa ndichitamba iyo NBA uye ndichiona mavhidhiyo uye ndichifambisa zvishoma asi iri kuverenga bhuku uye kupenya kunondinetsa zvakanyanya. Ini handizive kuti nei ndichiverenga kana zvichindinetsa uye kune zvimwe zvacho zvisina kunyanyisa asi zvakadero. Zvekuverenga ini ndinosarudza inki yemagetsi kubva kuPepa rangu reWhite.
George Charles akadaro
Iwe zvakanyanya hauverenge ePub?
Kuti ini ndiri kuda kutenga iyo Kindle Paperwhite, nekuti ini ndakaverenga kuti izvozvi zvinounza 4GB yenzvimbo. saka unogona kuisa mamwe ma ebook. Mumwe munhu wandaizivana naye akandiudza kuti zvinogona asi ndinoda kuti mumwe munhu andiudze kana zvichikwanisika kuverenga ePub pane iyo Paperwhite.
Pindura Jorge Carlos
Sekutaura kwaVictorio nechirongwa cheCaliber, unogona kuenda zvakakwana kubva kune imwe fomati kuenda kune imwe mune isingasviki miniti, saka kana uchifarira Kindle, hachisi chipingaidzo kwavari kuti vasaverenge ePub. Ndine Paperwhite uye ese mabhuku andinotora pasi ari muPub uye handina kumbobvira ndave nematambudziko ekugona kuverenga pane yangu eReader nekuti ini ndinoivashandura ndisati ndavachinjisa kuAZW3
Iyo Caliber inoshandura uye kugadzirisa chero dhijitari yebhuku fomati, ndine piritsi inoverenga epub uye Kindle inoverenga AZW3, nechirongwa ichi ini ndinobva kune imwe fomati kuenda kune imwe pasina matambudziko.
Ma. Josep akadaro
Mhoroi, ndangodzikisa caliber yangu uye handikwanise kuchinja fomati yacho kuve AZW3 nekuda kweiyo DRM
Ndapota, chii chandingaite?
Pindura Ma. Josep
Pedro Jose akadaro
Uchishandisa JailBreak uye kuisa CoolReader unogona kuverenga chero fomati yaunoda
Pindura Pedro Jose
Daniela naPedro Jose, ndinokutendai zvikuru nezvamakataura, ndinofunga kuti nhasi ndawana iyo Paperwhite, iyo yandakanamira neavo veGame of Thrones ndikazoenda kudhara reDune, ndaimboverenga paIpad asi Ndakaitengesa kuti ndiunganidze nekutenga laptop, saka zvinondinetesa kuverenga kubva pamakumbo.
Pedro Jose, ndinogona here kuita iyo JB neiyo yazvino vhezheni yepepa pepuka? chero zano rayo?
Ndatenda nematauriro ako
Ndakave nepepepependi kwemakore maviri uye ine zvayakanakira nezvayakaipira. Semunhu anoverenga, zvakanaka kuti uverenge. Yakanyatso kupedzwa uye kunzwa kwese kwakanaka. Izvo zvakati, pane zvinhu zvisiri kunyatso famba. Semuenzaniso, iyo isingagumi yekuyedza bhurawuza ndeye yakashata mhando. Muturikiri haakwanise kusarudzwa, kana iwe uchida Bing Mushanduri mushe, kana zvisiri, unofanirwa kushivirira nazvo. Izvo zvakare haina kusanganisira chero epeninsular mitauro seCatalan, Basque, nezvimwe.
Jorge Carlos, Tsvaga neGoogle, zviri nyore kwazvo
Ini ndanga ndisina chokwadi pakati pemhando yemapepa ekuchenesa uye iyo Samsung Note 8.
Kubatsira kweCherechedzo ndechekuti ine kwakawanda kugona uye inogona kuita zvimwe zvinhu. Mubvunzo ndewekuti inoverengwa sei nemhando yayo yekuverenga.
Ndine mubvunzo ... ini ndine bhuku ratotumirwa kuamazon, rine mifananidzo pakati pendima (kushandisa izwi) uye chokwadi ndechekuti ndakave nekukanganisa kukuru kuzvichengeta zvakabatana uye munzvimbo yazvo sezvazvinofanira kuva. Zvimwechetezvo, pandakaisa kuna amazon, zvekuti ndakafunga kubvisa mifananidzo kubva mubhuku rangu, izvo zvakandikonzera kunetseka kukuru. Unogona kundibatsira kuzvigadzirisa? Ndatenda
Ini ndichangotanga na Kindle uye mabook andaisa haasi kuoneka chero kupi. Ndava kupenga !!!!!!
Mhoroi, ini ndinogona kutora wechipiri-ruoko wechina chizvarwa Kindle. Zvichipa izvi, ndinoda kuziva kana iyo Kindle azw4 fomati iri kumashure chaizvo inoenderana.
Zvinoitika kuti yechina chizvarwa mudziyo unongotsigira iyo azw fomati uye ini handizive kana iyo azw3 fomati ingashanda mukati mayo. Ndatenda
Mhoroi, ini ndakaburitsa kindle yepc uye zuva rekutanga randakaverenga uye rakashanda zvinoshamisa asi ipapo haridi kutanga, rinogara ipapo richitanga. Chii chirikuita? Zvandinogona kuita. ndine windows 10 uye ini ndine 34 bit uye 64 bit caliber. zvakare kuverenga epub.
Pindura kuna jenny
Kobo Aura Edition 2, kushamisika kusingatarisirwi kubva kuna Kobo